Raphael Varane Oo Ka Hadlay Hadii Uu Rabo In Barca Ay Isku Wajahaan Final UCL & Midka Fiican Leo-Ronaldo %
Daafaca Real Madrid, ee Raphael Varane ayaa wuxuu qirtay xiisaha uu uqabo in Final-ka tartanka Champions League ay isku wajahaan kooxdiisa iyo Barcelona, kuwaasoo xifaaltan xoogan oo dhanka kubada cagta ah uu ka dhaxeeyo.
Laakiin, daafacaan reer Faransiiska ayaa wuxuu carafka ku dhufta in uusan dooneyn in wareega Sideed dhamaadka Champions League, oo isku aadkiisa la sameyn doono maanta oo Jimco ah uusan dooneyn inay isku arkaan kooxaha Spain.
“Waxaan doorbida lahaa in aanan la dheelin Sideed dhamaadka kooxaha reer Spain, oo aan la dheelo kuwa kale, maxaa yeelay waa ay fiican yihiin,” ayuu Varane ku sheegay wareysi xasaasi ah, oo uu siiyay El Larguero.
“Laakiin, waxaan jeclaan lahaa in final-ka Champions League, aan isku aragno Barcelona, maxaa yeelay waan ka helaa kulamadda aan la dheelayno iyaga,” ayuu hadalkiisa kusii daray, laacibkaan oo udub-dhaxaad u ah shaxda Zidane.
Dhanka kale, Varane ayaa wuxuu ka hadlay sheeko ay dad badan ku muransan yihiin, taasoo ah midka wanaagsan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, isagoona sheegay in xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee CR7 uu dhameeyay wax walba.
“Mar walba waxaa iweydiisaan, midka ku jiran bandhiga heer sare ah [Messi iyo Ronaldo], laakiin Ronaldo wuxuu yahay midka wax walba dhamaameeyay – Saaxibadey Real waxay iweydiiyay hadii uu dhamaayey, aniga waxaan usheegaan inay is-dejiyaan,” ayuu raaciyey.
“Marka aniga ma aqaan sida loo dhaleeceeyo ciyaaryahan sida Ronaldo, mana fahansani [sababta] – wax walba oo uu soo sameeyay ayaa ah kuwa uu hada sameynayo, sidaas darteeda ma dhalaceyn kartid,’ ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Varane.